Firmware ဖုန်းများနှင့်အခြား devices များ | October 2019
အဓိက Firmware ဖုန်းများနှင့်အခြား devices များ
စမတ်ဖုန်း Fly IQ445 Genius flash လုပ်နည်း
စမတ်ဖုန်း Fly IQ445 Genius အများစုဟာပိုင်ရှင်တွေအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်စဉ်းစားသို့မဟုတ်အနည်းဆုံးတစ်ဦးလွတ်လပ်သောစနစ်ဆော့ဖ်ဝဲကိုမဆိုတိုးတက်မှုဆောင်ခဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုမြှင့်တင်ရန်၎င်း၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို restore နိုင်ရန်အတွက်စက်ပေါ်မှာ Android OS ကို reinstall များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေအကြောင်းကိုကြား၏။ သငျသညျဆောင်းပါးကိုပူဇော်သက္ကာဘို့အတွက်မိုဘိုင်းဖုန်းများစနစ်ဆော့ဖ်ဝဲ, အသုံးပြုသူတွေနဲ့အလုပ်ကိစ္စရပ်များအတွက်အတွေ့အကြုံအပါအဝင်နီးပါးမည်သည့်အသုံးပြုမှုများအတွက်ရရှိနိုင်ပါကဤမော်ဒယ်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်အဘို့အကိရိယာများနှင့်နည်းစနစ်များကိုဖော်ပြထားတယ်။
မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်မတိုင်မီမှာ Android-device ကို backup တခုကိုလုပ်ဖို့ဘယ်လို
အန်းဒရွိုက်-devices များအတော်များများသည်အသုံးပြုသူများ firmware ကိုအတူစမ်းသပ်ချက်အမျိုးမျိုးအတွက် add-ons တွေကိုနှင့်ပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများတပ်ဆင်အတော်လေးမကြာခဏပဲလုံးဝစနစ်ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်မှန်ကန်သောအရာ, ကိရိယာ၏ inoperability ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြ, ဤဖြစ်စဉ်ကိုအားလုံးအချက်အလက်များ၏ပြည့်စုံသောသန့်ရှင်းရေးကပါဝင်ပတ်သက်သိရ။
Firmware စမတ်ဖုန်းကို Sony Xperia Z
Flash နှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး router ကို ASUS က RT ကို-N12 VP (B1)
ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲ: မဆို router ကိုအစိတ်အပိုင်းများကိုနှစ်စုံ၏အပြန်အလှန်မှတဆင့်၎င်း၏လုပ်ငန်းဆောင်တာကိုလုပ်ဆောင်တယ်။ လျှင်ပျမ်းမျှအသုံးပြုသူများအတွက်နည်းပညာဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာ module တွေအတွက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအတွက် firmware ကို, ထို့နောက်မဖြစ်နိုင်ပါနှင့်ကောင်းစွာပင် Router ကကိုယ့်ကိုကိုယ်၏ပိုင်ရှင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြပေမည်။
MIUI firmware ကိုရွေးချယ်ခြင်း
ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီစမတ်ဖုန်းနှင့် Xiaomi က Android ကို-devices များအားလုံးပရိတ်သတ်တွေယနေ့လူသိများသည်များစွာသောအခြား devices များ။ လူအတော်များများက Xiaomi ၏အောင်မြင်မှုကိုဖို့အောင်ပွဲခံချီတက်မျှမျှတတထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်မှုနှင့် MIUI ကို Android-firmware ကို၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူမ start ကိုငါသိ၏။ လူကြိုက်များအချိန်ကြာမြင့်စွာရရှိမှုပြီးနောက်, shell ကိုယနေ့စမတ်ဖုန်းနှင့် tablet ပေါ်မှ OS ကိုထုတ်လုပ်သူအမျိုးမျိုးအဖြစ် MIUI အသုံးပြုထုံးစံဖြေရှင်းချက်၏ပရိသတ်များအကြားအလွန်ကြီးစွာသောဝယ်လိုအားအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
Firmware စမတ်ဖုန်း Meizu M2 Mini ကို
Firmware စမတ်ဖုန်းကို Samsung က Galaxy ဝင်းပါ GT-I8552
Samsung ကစမတ်ဖုန်းအများစုထုတ်လုပ်သူအသုံးပြုသောအရည်အသွေးမြင့်ဟာ့ဒ်ဝဲအစိတ်အပိုင်းများကြောင့်တစ်ဦးအလွန်ရှည်လျားဝန်ဆောင်မှုဘဝဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိပါသည်။ ကိစ္စအများစုတွင်, devices တွေကိုနည်းပညာပိုင်းအသံသည်များမှာတောင်မှစစ်ဆင်ရေး၏နှစ်ပေါင်းများစွာပြီးနောက်သုံးစွဲသူများအနေဖြင့်အချို့သောတိုင်ကြားစာသူတို့ရဲ့အစီအစဉ်၏တစ်ဦးသောအဘို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
စမတ်ဖုန်းကို HTC Desire 516 dual sim firmware နှင့် restore
ကို HTC Desire 516 dual sim - လူအတော်များများအခြား Android အခြေပြုပစ္စည်းတွေအများအပြားနည်းလမ်းချုပ်စေနိုင်သည်တူသောအရာ, စမတ်ဖုန်း, ။ စနစ်ဆော့ဖ်ဝဲကိုပြန်လည် - ဒါကြောင့်ခဲဒီ model ၏ပိုင်ရှင်များမဟုတ်သောအရာပေါ်ပေါက်ဘို့လိုအပ်ကြောင်း။ ဤသည်ကိုင်တွယ်ဆော့ဖျဝဲ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ device ကို "refresh" ရန်အဖြစ်မအောင်မြင်မှုများနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အမှားအယွင်းများ၏ရလဒ်အဖြစ်ပျောက်ဆုံး restore ရန်သင့်တဲ့အချို့သောအတိုင်းအတာအထိများ၏လျော်ခြင်းနှင့်အောင်မြင်သောအကောင်အထည်ဖော်ရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။
Firmware စမတ်ဖုန်း Meizu M3 Mini ကို
အန်းဒရွိုက် Firmware များအတွက် Installing ယာဉ်မောင်း
အဆိုပါ firmware ကိုအန်းဒရွိုက်-devaysa ရယူခြင်းစပိုင်းတွင်ပြင်ဆင်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဤသည်လျင်မြန်စွာနှင့်ထိထိရောက်ရောက် device အတွက်လိုအပ်သော software ကိုအစိတ်အပိုင်းများကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုခွင့်ပြုအဖြစ်တစ်ဦးညှဉ်းဆဲစသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဖွင့်ပါလိမ့်မယ်သောအမှားများကိုရှောင်ရှားရန်အခွင့်အလမ်းကိုငါပေးမည်။ အရေးကြီးဆုံးခြေလှမ်းတစ်ခုမှာအထူးပြု software ကို Windows အတွက်-based application များမှတစ်ဆင့် Android ကို-devices များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်သည့်အခါ "broaching" ယာဉ်မောင်း၏ installation ဖြစ်ပါတယ်။
Odin အစီအစဉ်ကိုမှတဆင့် firmware ကို Samsung က Android-device များ
Samsung ကကုမ္ပဏီ၏ - - အသုံးပြုသူများကိုမကြာခဏဖြစ်နိုင်ချေဒါမှမဟုတ်စက်ကို firmware ကို၏လိုအပ်ချက်စဉ်းစားရခက်။ ကို Android-device များကစမတ်ဖုန်းနှင့် tablet အတွက်ကမ္ဘာ့စျေးကွက်ခေါင်းဆောင်များတစ်ဦးထုတ်လုပ်ရန်၏ယုံကြည်စိတ်ချရရဲ့အဆင့်မြင့်နေသော်လည်း အန်းဒရွိုက်-devices များထုတ်လုပ်မှုများအတွက် software နှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိုင်တွယ်များအတွက် Samsung ကအကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်း Odin အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
SP FlashTool မှတဆင့်မယ်တော်ဆေးခန်းအပေါ်အခြေခံပြီး firmware က Android-device များ
ခေတ်မီစမတ်ဖုန်း, တက်ဘလက်ကွန်ပျူတာများနှင့်အခြား device များအတွက်အခြေခံအဖြစ် MTK ဟာ့ဒ်ဝဲပလက်ဖောင်းကျယ်ပြန့်ပြန့်နှံ့လျက်ရှိသည်။ အတူတူအသုံးပြုသူများသည်၏ဘဝအသက်တာ၌ပစ္စည်းတွေအမျိုးမျိုးနှင့်အတူ OS ကို Android မှာ၏မူကွဲကိုရှေးခယျြဆီသို့ရောက် လာ. , - နာမည်ကျော် MTK device များအတွက်ရရှိနိုင်အရာရှိတဦးနှင့်ထုံးစံ firmware ကို၏နံပါတ်အများအပြားသောင်းချီရောက်ရှိနိုင်သည်!
Firmware Xiaomi က Redmi3(PRO) စမတ်ဖုန်း
Router ကို TP-Link ကို TL-WR841N firmware နှင့် restore
အဆိုပါဆိုသည် router ၏ထိရောက်မှုအဖြစ်အသုံးပြုသူများမရရှိနိုင်ပါအင်္ဂါရပ်များစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် range သူ့အဆင့်ကိုဟာ့ဒ်ဝဲအစိတ်အပိုင်းများအပေါ်သာမူတည်, ဒါပေမယ့်လည်း device ကို firmware ကို (firmware ကို) သို့ပေါင်းစည်း။ မည်သည့် software ကို router ကိုတခြား device များအတွက်ထက်အငယျဆုံးသောအတိုင်းအတာအထိ, ဒါပေမယ့်နေဆဲတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်တခါတရံတွင်ပျက်ကျမှုပြန်လည်နာလန်ထူရန်လိုအပ်သည်။
Firmware စမတ်ဖုန်း Xiaomi က Mi4c
၎င်း၏အဆင့်မြင့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများကြောင့်နှောင်းပိုင်းက 2015 ခုနှစ်တွင်ဖြန့်ချိ flagship စမတ်ဖုန်း Xiaomi က Mi4c, အလွန်ဆွဲဆောင်မှုအဆိုပြုယနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနေဖြင့်အပြည့်အဝအလားအလာ devaysa အသုံးပြုသူများအတွက်တစ်ဒေသတွင်း firmware ကို MIUI install နှုနျးဖို့ရှိသည်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးထုံးစံဖြေရှင်းချက်၏ပါလိမ့်မယ်။
Firmware ကို Samsung က Galaxy Note 10.1 ကို GT-N8000
Firmware စမတ်ဖုန်း Lenovo က A6010
Firmware စမတ်ဖုန်း ASUS က ZenFone2ZE551ML
ASUS ကစမတ်ဖုန်းထိုက်ထိုက်တန်တန်ကြောင့်၎င်း၏လုပ်ငန်းဆောင်တာအများစု၏အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဖို့အပါအဝင်ခေတ်မီကိရိယာများကိုဝယ်လက်တို့တွင်အမြင့်မားသောဝယ်လိုအားပျော်မွေ့။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, မည်သည့် device ကိုအထူးသဖြင့်ဆော့ဖ်ဝဲအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုထဲတွင်ချို့ယွင်းချက်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါဆောင်းပါးတွင်စမတ်ဖုန်းထိုင်ဝမ်ထုတ်လုပ်သူ ASUS ကအကြားလူကြိုက်အများဆုံးဖြေရှင်းချက်၏တဦးတည်းအပေါ်အလေးပေး - မော်ဒယ် ZenFone2ZE551ML ။
Router ကို ZyXEL Keenetic Lite ကိုအပေါ် firmware ကိုအသစ်ပြောင်းခြင်း
Lite ကိုမော်ဒယ်အပါအဝင် routers ZyXEL Keenetic သည်, အသုံးပြုနိုင်စွမ်းနှငျ့သငျမဆိုအထူးကျွမ်းကျင်မှုမရှိဘဲ firmware ကို update လုပ်ဖို့ခွင့်ပြုအလိုလိုသိ interface ကိုကြောင့်အသုံးပြုသူများအကြားတွင်ကျယ်ပြန့်လူကြိုက်များကြသည်။ ဤဆောင်းပါး၌ကျနော်တို့အသေးစိတ်အတွက်နည်းလမ်းနှစ်ခုအတွက်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဖော်ပြရန်ပါလိမ့်မယ်။ ကွဲပြားခြားနားသောမော်ဒယ်များ ZyXEL Keenetic interface ပေါ်မှာ ZyXEL Keenetic Lite ကိုအပေါ် firmware ကို Installing firmware ကို updates များကိုနှင့် configuration များအတွက် installation လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအလားတူလမ်းအတွက်ရာအရပ်ကိုကြာအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သောနီးပါးတူညီသည်။
Firmware စမတ်ဖုန်း Lenovo က IdeaPhone P780
https://termotools.com my.termotools.com © Firmware ဖုန်းများနှင့်အခြား devices များ 2019